Homeसमाचारविश्वकै पहिलो सुनले बनेको होटल, एक रात बसेको मुल्य कति पर्छ त
October 27, 2020 admin समाचार 10873
मानि’सका इच्छा अ’नौठा हुन्छन् । संसारमा आफुलाई फरक सावित गर्न मानिसले अनेक काम गर्छ । व्यवसायमा पनि त्यस्तै प्रति’स्पर्धा हुन्छ । आफुलाई संसा’रमै फरक देखाउन हो’डवाजी चलेको हुन्छ ।
यस्तै होडवाजीमा भियत’नामको राजधानी ह’नोइमा सुनै सुनको होटल खुलेको छ । सो होटलको ढोका, कप, टेवल, धारा, वास’रुम, खाना खाने भाँ’ढा सबै सुनको ट । यो होटलको सु’रुवात २ जुला’ईमा भएके हो । होटलको सुभा’रम्भ भएसंगै संसार’भर यसको चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
होटल’को नाम डोल्से हनोई गोल्ड लेक राखि’एको छ । यो होटलको गेट देखि कप समेत सुन’कै बनेका छन् । यो होटल स्टार होटल हो । जो २८ तले भवन छ । जसमा ४०० वटा को’ठा रहेका छन् । जसको ढोकामा पनि ६४ वर्ग फीट गोल्ढ प्ले’टेड टायल लगाइएको छ ।
होटलको स्टा’फले लगाउने ड्रेस कोड पनि रातो र गोल्डन राखिएको छ । लबीमा राखिएको सजा’वटमा पनि सुनकै जलप छन् । हेर्दा सबै होटल सुनैसुनको देखिन्छ । वॉश’रूमको बाथटब, सिंक, शॉवर देखि सबै सामा’न सुनको बनाइएको छ । वेडरु’पका फर्नीचर र सज्जाका सामान सवै सुनको प्लेगि’गं गरिएको छ ।
छतमा इन्फि’निटी पूल बनाइएको छ । जसवाट हनाई शहरको मनोरम दृष्य देख्न सकिन्छ । छत’मा पनि गोल्ड प्लेटेड गराइएको छ । उद्घाट’नका दिनमा पुगेका पाहुना’हरुले छतवाट देखिने मनोरम दृष्यमा रुचि देखाएका थिए भने कतिले सुनको साव’रमा तस्विर खिचाएका थिए ।
होटल को दक्षि’ण(पूर्व एशियामा सबैभन्दा महंगो र आरामदायी होटल भनेर भनिएको छ । यो होटल बनाउ’नुको कार’णका बारेमा बताउँदै भनिएको छ । यसले मान’सिक तना’व कम गर्न मद्ध’त गर्ने छ ।
यति धेरै लगानी गरि’एको यो होटलमा बसेको भा’डा कति लाग्छ होला ? होटल ब्यव’स्थापन पक्षले भनेको छ । यो होटलमा बसे’को एक रातको करिब १ लाख २५ हजार रुपैया लाग्नेछ । यो होट’लको सुरुवा’ती रुमको भाडा नै ३५ हजार रुपै’यावाट सुरु हुन्छ ।
यो होट’लमा यस्तो ६ वटा विशि’ष्ट रुमहरु छन् । डबर रुम सुइटमा बसेको एक रातको करिब १ लाख २५ हजार रुपैया पर्नेछ । ६ प्रकारका सुइट रुम रहेको होटल ब्यवस्था’पन पक्षले जनाएको छ । सबैभन्दा विशिष्ट रुमका लागि एक रा’तको करिब ८ लाख रुपैया छ । – इ ताजा खबर बाट
February 11, 2021 admin समाचार 6783
प्रधानमन्त्री चढेको जहाजमा यसरी पसे धमला,यस्तो हर्कत बारे निगम के भन्छ ?(भिडियो हे’र्नुस्)
April 6, 2022 admin समाचार 672
विभिन्न हर्क’तहरूका कारण बारम्बार चर्चा र विवा’दमा आइरहने पत्रकार हुन् ऋषि धमला । अहिले उनको एउटा नयाँ भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भा’इरल बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रम’णबाट फर्कने क्रममा चढेको नेपाल एयरलाइन्सको विमानभित्रैबाट
June 13, 2021 admin समाचार 5296